Farmaajo “Malaaq Yuusuf Cabdiyow waxaa uu qayb ka ahaa dadaalladii dowlad dhiska iyo nabadaynta Dalkeenna.” – Kalfadhi
Farmaajo “Malaaq Yuusuf Cabdiyow waxaa uu qayb ka ahaa dadaalladii dowlad dhiska iyo nabadaynta Dalkeenna.”
March 15, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna bulshada iyo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, geerida ku timid Alle ha u naxariistee, Malaaq Yuusuf Cabdiyow Macallin Aadan oo caawa ku geeriyoodey magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in Marxuumku uu ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee bulshada Soomaaliyeed ka soo gudbiyey marxaladihii adkaa, isaga oo door weyn ka soo qaatay dib u dhiska dowladnimada, xasilloonida, dib u heshiisiinta bulshada iyo dhammaan dadaalladii geeddi socodka nabadda ee xal u raadinta dhibaatooyinka dalkeenna ka dhacay.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Alle ha u naxariistee Malaaq Yuusuf Cabdiyow Macallin Aadan oo ka mid ahaa tiirarka dhaqanka bulshada Soomaaliyeed oo caawa ku geeriyooday magaalada Baydhabo. Malaaqu waxa uu ka mid ahaa tiirarka nabadda iyo dhaqanka ee bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale, Marxuumku waxa uu qayb ka ahaa dadaalladii dowlad dhiska iyo nabadaynta Dalkeenna.”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka tacsiyeeyay geerida nabadoon kamid ahaa odayaashii soo xulay xildhibaannada
Senator Nadiir oo ugu baaqay dowladda iyo maamulka Jubbaland in ay ka wadda-shaqeeyaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool Gedo